I-Semalt: I-Web Scraping With Python - Iseluleko Esiphezulu
I-intanethi namuhla umthombo omkhulu wolwazi, futhi abantu abaningi bayisebenzisa nsuku zonke ukuthola nokukhipha yonke idatha abayidingayo. Ukuze benze kanjalo, benza ukukhipha iwebhu - inqubo emangalisayo ye-intanethi engabasiza ukuba babuthe imiphumela emihle. Isiteji sokukhishwa kwewebhu esesabekayo yisiteji sePython, esinikeza amathuluzi okukhipha okungafani futhi okusheshayo kubasebenzisi bayo.
Ama-Libraries alula we-Python
Nanobe kunamasevisi amaningi okukhipha inthanethi, i-Python inikeza imilayibrari elula, lapho abasebenzisi bangakwazi khona ukuhamba futhi baqoqe idatha yabo. Lokhu kungabasiza ukuba bathuthukise imikhiqizo yabo, ngokuqhathanisa uhlu lwamanani kanye nolunye ulwazi, ngakho-ke bangakwazi ukuthuthukisa ukusebenza kwebhizinisi labo ngokuthola amakhasimende amaningi. Nge-Python, ukuze ihlole iwebhusayithi , abaseshi bewebhu badinga ukuthola iphethini lokuxhumana, umugqa we-HTTP.
Amathuluzi ayingqayizivele e-inthanethi ahlinzekwa ngu-Python
I-Python inikeza amathuba amahle abasebenzisi bayo. Abasesheli bewebhu kudingeka bakhumbule ukuthi namuhla amawebhusayithi amaningi anencazelo ecacile ye-HTML. Kodwa into enhle ukuthi iziphequluli eziningi zihlinzeka ngamathuluzi akhethekile ukuthola ukuthi izakhi ziyingcosana futhi zikhipha. Isibonelo, abaseshi bewebhu bangasebenzisa isobho esihle, okuyinto ithuluzi elihle lokusakaza. Isosi elihle linikeza abasebenzisi ezinye izindlela ezisheshayo nezilula ze-web scraping. Eqinisweni, iguqula zonke izinto ezingenayo nezingenayo ngokuzenzakalelayo ku-Unicode. Abasebenzisi akudingeki bacabange nganoma yiziphi izinkomba - ithuluzi elilula futhi elihlelekile elingasetshenziswa kalula. Isibonelo, uma abasebenzisi behlela i-HTML, bangacacisa umakhi wesihlahla, ngokusebenzisa i-HTML parser (efaka phakathi ku-Python). Uma abasebenzisi badinga i-scraper yabo ukuthola yonke idatha ehlobene abayidingayo, kufanele bafune ikhodi ekhethekile (i-HTML) kumakhasi athile wewebhu azungeze i-intanethi. Yiqiniso, kufanele bakhumbule ukuthi iziphequluli eziningi zewebhu zikwazi ukubona ikhodi yokunyakaza ye-HTML, ngokusebenzisa nje ukuchofoza okulula. Ngemuva kokugcina ikhodi ye-HTML yekhasi elithile, bayakwazi ukuskena yonke imibhalo abayidingayo ngokuqondile.
Amakhasi okudweba nge-Python
Uma befuna ukukhipha amakhasi apheleleyo nge-Python, bangasebenzisa isihloko esikhethekile esivela phezulu. Ngokwenza kanjalo, bangakwazi futhi ukuthatha amagama wemikhiqizo noma ezinye izixhumanisi (njengezixhumanisi ze-YouTube) kusuka ebhawulweni. Empeleni, i-Python isebenzisa amathuluzi ahlukahlukene wezobuchwepheshe ukuhlaziya amadokhumenti futhi iza nemiphumela eyanelisayo. Ngokuqondile, lolu hlelo lokusebenza lusekela izinhlelo ezahlukene futhi lunikeza isikhombimsebenzisi esibonakalayo nesilula kubasebenzisi bayo. Ngenxa yalokho, ama-web scrapers angathola kalula idatha yesikhathi sangempela kunoma yisiphi isikhathi abafisa. Ngaphezu kwalokho, linikeza ithuba kubantu ukuhlela amaphrojekthi abo. Ngale ndlela izinkampani eziningi zingavuna idatha ehlukahlukene kumakhasi ewebhu ashukumisayo nsuku zonke. Ngenxa yalokho, bangakwazi ukuhlaziya lonke ulwazi oluhlobene nabo ngokuhamba kwesikhathi ngekhompyutha yabo. Kuyindlela enhle yokuthola konke okudingayo, ukunqoba abancintisana nabo, banikeze amanani angcono nemikhiqizo engcono futhi bagcine amakhasimende abo anelisekile Source .